Gudoomiyaha Gobolka Banaadir Oo Kulan Dhiira Galin Ah U Sameyay Ardaydii Ugu Horaysay Ee Arag La` Oo Dalka Gudihiisa Ku dhamaysay Dugsiga Dhaxe (Daawo Sawirada) | Somali Association for the Blind (SAB)
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir Oo Kulan Dhiira Galin Ah U Sameyay Ardaydii Ugu Horaysay Ee Arag La` Oo Dalka Gudihiisa Ku dhamaysay Dugsiga Dhaxe (Daawo Sawirada)
Kulan kan oo ay ka qayb galeen maamulka gobolka banaadir oo ugu horeyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Yusuf Xuseen Jimcaale, waxaa sidoo kale ka qayb galay taliyaha ciidamada boliska Somaliya Maxmed Sheikh Xasan Xaamud, , wasiiro ka tirsan maamul gobaleedyada dalka, hayadda Hormud Telcom foundation. maamulka maclimiinta iyo ardayda dugsiga Alnuur ayaa lagu qabtay magalada Muqdisho.
Ujeedka kulankan oo ahaa mid lagu dhiira galinayay dufacadii ugu horaysay ee ka baxada dugsiga dhaxe ee indhoolayaasha Al-nuur ayaa masuuliyiintii ka qayb galay waxay hambalyo iyo bogaadin u jeediyeen ardaydaas oo noqoday kuwii ugu horeyay ee dalka ugdihiisa ku dhameysta dugsiga dhaxe iyo bahada dugsiga Alnuur ee magalada Muqdisho oo soosaaray ardaydaas iyo shirkadda Hormuud oo caawisa dugsiga Alnuur.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa shegay in dadka araga la` ee waxbartay u sameen donaan shaqo abuur, isgoona xusay in maamulka dugsiga Alnuur iyo hayadda Hormuud inay bulshada somaliyeed ay kuleeyihiin kaalin muuqata oo muhiim ah, wuuxana ku amaanay howsha ay hayaan.Taliyaha ciidamada boliska somaliya Maxmed Sheekh Xasan Xaamud ayaa xusay in kulankan ay wax badan ka faa`ideen, isgoona balan qaaday inay kordhin donaan xiriirka nafada iyo ciidamada Boliska.
Maamulaha dugsiga Al-nur Cabadi fataax Maxmed Dahir iyo Gudoomiye ku xigeenka hayadda Hormuud Telcom Foundation Cabadiraxmaan Ibraahim Cilmi (Ookiyaale) ayaa si iskumid ah uga mahad celiyay kulankaasi oo muhiim uhaa dadka guud ahaan dadka araga la` gaar ahaan ardayda dugsiga Al-nuur.
Yusuf Xuseen jimcaale gudoomiyaha gobolka ahna duqa Muqdisho ayaa noqday gudoomiyihii ugu horeyay ee somara gobolka oo booqda xarunta dugsiga indhoolayaasha Alnuur islamarkaana dhiira galiya.